The Rohingya News Bank : KNU
Showing posts with label KNU. Show all posts
Labels: 2021, ASEAN, en, Fighting, KNU, Myanmar, News, Video
ICJ ကိစ္စ ကွန်ဗန်းရှင်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း လိုက်နာအ ကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ဟု KNU ပြော
ကေအဲန်ယူ အထွေ ထွေအတွင်း ရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူး( Photo_KIC)
လက်ရှိမြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး(ICJ)တွင် အမှုရင်ဆိုင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်အပေါ် အခြေခံ၍ ကွန်ဗန်းရှင်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း KNU- ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး က ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ(UN) ၏ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ရာဇဝတ်မှု၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ် ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်အလျောက် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ တရားစွဲ ဆိုမှု အပေါ် ICJ တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင်သွားမည့်အပေါ် ကေအဲန်ယူအနေဖြင့် ကြိုဆိုထောက်ခံပြီး သဘော တူညီ ချက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ကေအဲန်ယူ အထွေ ထွေအတွင်း ရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူးက ယခုလိုပြောသည်။
Labels: 2019, ICJ, KIC, KNU, mm, ကွန်ဗန်းရှင်း, သတင်း
အိုင်စီဂျေအမှု၌ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများက အစိုးရကို ထောက်ခံကြမည်ဆိုသောသတင်း ကေအင်န်ယူငြင်းဆို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်(ဝဲ) နှင့် ကေအင်န်ယူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးတို့အား အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်က တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လေးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား၌ တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - အေအက်ဖ်ပီ
လူမျိုးတုံးသုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များကို အစိုးရကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေရာတွင် အင်န် စီအေ လက်မှတ်ထိုးထားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက အစိုးရကို ကူညီရန် သဘောတူကြ သည်ဟူ
သော သတင်းကို ကေအင်န်ယူ အထက်တန်းအရာရှိများက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
Labels: 2019, Frontier Myanmar, ICJ, KNU, mm, ငြင်းဆို, လက်နက်ကိုင်အုပ်စု, သတင်း
လွှတ်တော်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုသဘောတူ ညီ ချက်များ ဖောက်ဖျက်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးအဓိပ္ပာယ် မဲ့နိုင်ဟု ကေအင်န်ယူအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆို
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေးများမှ ရရှိထားသော အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ နိုင်ငံရေးပါတီများ အကြား သဘောတူညီ ချက်ဖြစ် သည့် ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ် အပိုင်းများကို လွှတ်တော်က ဖောက် ဖျက်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေး အဓိပ္ပာယ်မဲ့ နိုင်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်း အရုံး(KNU)အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒို မူး က မြန်မာတိုင်းမ် နေ့စဉ်သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
Labels: 2019, KNU, mm, ပြည်သူ့လွတ်တော်, ပြည်ထောင်စု, သတင်း, သဘောတူညီချက်, အတွင်းရေးမှုး
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ၂၀၁၉ မတ်လ ၅ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ တွေ့ရစဉ်
လက်ရှိ NCA အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း ခွင့် အခွင့်အရေးနဲ့ အာမခံချက်တွေ အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကိုရောက်စေမယ့် လမ်းကြောင်းတွေကနေ သွေဖည်သွားပြီလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, KNU, mm, NCA, RCSS, ချင်းမိုင်, ဒီမိုကရေစီ, ဖက်ဒရယ်
နယူးယောက် ရိုဟင်ဂျာအရေးဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့
APTOPIX Bangladesh UN Myanmar Human Rights
ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုကြတဲ့ ၂ ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲတခုကို အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာ မနေ့ကစပြီး ကျင်းပနေပါတယ်။ ဒီအခန်းအနားကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာအထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စယန်ဟီးလီက ဗွီဒီယိုကတဆင့်အမှာစကားပါးခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာအရေး အဓိက ထားပြီး ပြောဆိုနေကြတဲ့ ဒီအခန်းအနားက ထူးခြားချက်တချို့ကို ကိုကျော်အောင် လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Labels: 2019, KNU, mm, နယူးယောက်, ယန်ဟီးလီ, ရိုဟင်ဂျာ, ဒေါက်တာဇာနည်
KNU, RCSS must make clear timeframe for suspension of talks
AUNG NAING OO | 11 JAN 2019
A friend who follows the peace process from afar wrote to me recently and asked, “Is Myanmar trying to keepaceasefire that may no longer exist soon?”
His comment came following the suspension of cooperation in November by the two biggest ethnic armed organisations – the Karen National Union (KNU) and Restoration Council of Shan State (RCSS) – that signed the Nationwide Ceasefire Agreement in October 2015.
Labels: 2019, AA, en, KK, KNU, MMT, NCA, News, RCSS